AlmaLinux inova nhengo-centric chirongwa | Linux Vakapindwa muropa
AlmaLinux yaive imwe yekutsiva yeCentOS yakabuda munharaunda. Iye zvino chirongwa ichi chinotarisa kuve nhengo, kufamba uko CloudLinux ichachengeta vimbiso yayo yekuita iyi distro yemunharaunda-yakavhurwa sosi yeprojekti pane yekutsigira.
AlmaLinux Foundation yakazivisa chirongwa chehunhu sedanho rekuona kuti iyi kugoverwa kweGNU / Linux ichave munharaunda ine uye yakachengetedzwa chirongwa, uye kuti haizovi pasi pezvido zvemumwe mubatsiri anotsigira. Icho chaive chivimbiso chakaitwa naIgor Seletskiy, muvambi uye CEO weCloudLinux, uye izvozvi akazvichengeta. Uye zvakare, akazivisa kuti kambani yake yaizoisa mari 1 miriyoni emadhora pagore kutanga uye kubhadhara distro nyowani kutsiva CentOS, chimwe chinhu chaakaitawo ...
Naizvozvo, nhau huru dzemunharaunda uye nevose vashandisi vanovimba nazvo CentOS ivo vakave nherera pamwe neshanduko mukuvandudza kweiyi distro. Zvakare, yeuka kuti izvi zvakakanganisa CloudLinux pachayo, sezvo yaivimba neCentOS yayo yega yekutengesa yekuparadzira yakanangana neyegore rinogadzira indasitiri.
Iye zvino CloudLinux yakaburitsa pachena kuti AlmaLinux haipo kungosangana nezvako zvaunoda yekambani ino, asi asi kuti nharaunda ichave muridzi chaiye weprojekiti uye ichave nezwi uye vhota kana zvasvika pakutora sarudzo nezve chirongwa ichi.
Pakupedzisira, maererano nhengo sarudzo yeAlmaLinux, zvionekwe.
Collaborator: chero munhu ane chinongedzo kuna AlmaLinux, vangave ivo mushandisi kana mushandirwi wechero chirongwa. Iko hakuna mari inosanganisirwa nehunhengo.
girazi- Kune chero munhu kana boka rinogamuchira replicas yeAlmaLinux, zvisinei kuti vangani magirazi avanopa ekugamuchira ino system.
Sponsor: inoda mupiro wemari kubatsira nharaunda neimwe jekiseni rehupfumi. Inogona kutorwa nevanhu kana masangano kune rutsigiro rwemari rweAlmaLinux Foundation.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » AlmaLinux inova yenhengo-centric chirongwa